Wepamusoro 3 Matekiniki eVaparidzi muna 2021 | Martech Zone
Gore rapfuura rave rakaomera vaparidzi. Zvichipa mhirizhonga yeCOVID-19, sarudzo, uye kusagadzikana kwevanhu, vanhu vazhinji vakadya nhau zhinji uye varaidzo pamusoro pegore rapfuura kupfuura nakare kose. Asi kusahadzika kwavo kwenzvimbo dzinopa ruzivo irworwo kwasvika pakakwirira-nguva, seiyo kuwedzera kwemashoko enhema yakasundira kuvimba mumasocial media uye kunyange injini dzekutsvaga kuti dzinyorwe zvakadzika.
Dambudziko rine vaparidzi pamarudzi ese ezvinyorwa zviri kunetsekana kuti vangadzore sei kuvimba kwevaverengi, kuvachengeta vachiita basa uye kutyaira mari. Zvichiomesa zvinhu, izvi zvese zvinouya panguva iyo vaparidzi vari kubatawo nekuparara kwevatatu makuki, ayo vazhinji vakavimba nevateereri vachinongedzera kuendesa kushambadza uko kunochengeta mwenje nemaseva ari kumusoro uye achimhanya.
Sezvo isu tichitanga gore idzva, iro isu tese tinotarisira kuti richava risinganyanyi kunetsa, vaparidzi vanofanirwa kutendeukira kune tekinoroji iyo inoita kuti vakwanise kusangana nevateereri zvakananga, kucheka wepakati pezvemagariro midhiya uye kutora uye kuwedzera mamwe ekutanga-bato mushandisi data . Heano matatu matekiniki echirongwa ayo achapa vaparidzi ruoko rwepamusoro kuvaka yavo yega vateereri dhata dhata uye kupedza kuvimba kwavo kune vechitatu-bato sosi.
Sarudzo 1: Kuenzanisira Pamwero.
Vaparidzi havagone kutarisira zvechokwadi kuti iyo hombe midhiya yekushandisa ichaenderera. Vatengi vakaremerwa neruzivo rwakawandisa, uye vazhinji vakadzora nekuda kwavo hutano hwepfungwa. Kunyangwe yevaraidzo uye mararamiro enhau, zvinoita kunge vazhinji vane vateereri vangosvika panogutsa. Izvi zvinoreva kuti vaparidzi vachazoda kutsvaga nzira dzekutora kutarisisa kwevanonyoresa uye nekuvachengeta vachidzoka.
Kuendesa zvakanyatsoenderana nezvako zvemukati ndeimwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvo chete. Nekuwanda kwakawanda, vatengi havana nguva kana moyo murefu wekurongedza kuburikidza nezvose kuti vawane zvavanonyatsoda kuona, saka vanozonamira kuzvitoro zvinokanganisa zvirimo kwavari. Nekupa vanyoreri zvimwe zvavanoda, vaparidzi vanogona kuvaka vanovimbwa navo, hukama hwakareba nevanozvinyorera vanozovimba nevavanoda zvemukati vanopa kuti vasatambise nguva yavo nezvinhu zvisina basa zvavasina basa nazvo.
Strategy 2: Mimwe Mikana yeAI Technology
Ehezve, kuendesa zvakasarudzika zvemukati kune wega wega mubhadhari hazvigoneke pasina otomatiki uye ekunyepedzera njere matekinoroji kubatsira. AI mapuratifomu anogona ikozvino kuteedzera maitiro evateereri pa-saiti-yavo yekudzvanya, yekutsvaga uye kumwe kubatanidzwa - kuti vadzidze zvavanofarira uye vagadzire chaiyo chitupa girafu kune mumwe nemumwe mushandisi.
Kusiyana nemakuki, iyi data inosungirwa yakanangana nemunhu zvichibva pakero yavo yeemail, ichipa yakanyanya kujeka, chaiyo uye yakavimbika seti yevateereri njere. Zvino, kana iye mushandisi akapinda mukati zvakare, iyo AI inoziva mushandisi uye inongoerekana yaisa kumusoro izvo zvemukati zvakanyengedza kubatanidzwa. Iyoyo tekinoroji zvakare inobvumidza vaparidzi kutumira otomatiki izvi zvemunhu zvemukati kune vanyoreri kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana, kusanganisira email uye kusundira notisi. Nguva imwe neimwe mushandisi paanodzvanya pane zvemukati, iyo sisitimu inowedzera kungwara, ichidzidza zvakawanda nezvezvavanoda kuti vagadzirise zvemukati zvemunhu.
Danho rechitatu: Shift Toward kune Varidzi Dhata Maitiro
Kufungidzira maitiro ekugadzirisa kurasikirwa kwemakuki inongova chikamu chehondo. Kwemakore, vaparidzi vakavimba nemasocial media kugovera zvirimo uye kuvaka nharaunda yevanonyoresa. Nekudaro, nekuda kwekuchinja pamitemo yeFacebook, zvemukati zvevabudisi zvakaiswa-kukosheswa, uye ikozvino, iri zvakare kubata vateereri dhata rekutapa. Sezvo kushanya kwese saiti kubva kuFacebook iri yekuendesa traffic, Facebook yega inobata kune iyo data yevateereri, zvinoreva kuti vaparidzi havana nzira yekudzidza nezve izvo zvido zvevashanyi nezvido zvavo. Nekuda kweizvozvo, vaparidzi havabatsiri kuvanangisa nezvakanyorwa zvemunhu zvatinoziva izvo zvinoda vateereri.
Vaparidzi vanofanirwa kutsvaga nzira dzekuchinja kubva pakuvimba neiyi yechitatu-bato yekufambisa traffic uye vozvivakira yavo yega data data cache. Kushandisa iyi 'yedhisheni dhata' kunongedza vateereri vane zvemukati zvemukati zvakakosha zvakanyanya sekuvimba muFacebook nemamwe mapuratifomu enhau. Zvinyorwa zvisingaite nzira dzekutora nekushandisa dhata revateereri kuendesa zvimwe zvakajairwa zvemukati zvinorasikirwa nemikana yekusvika nekubata vaverengi uye kutyaira mari.
Kunyange isu tese tichiedza kufunga kuti tingafambisa sei "hutsva hutsva," chidzidzo chimwe chakaitwa kujekeswa: masangano anoronga zvisingatarisirwi, izvo zvinochengetedza hukama hwakasimba-kune-mumwe nevatengi vavo, vane nani mukana wekuzeya chero shanduko inogona kuuya. Kune vaparidzi, izvo zvinoreva kudzikisira kuvimba kune vechitatu mapato anoshanda sevachengeti vemagedhi pakati pako nevako vanyoreri uye pachinzvimbo chekuvaka nekumisikidza yako wega data revateereri kuendesa iwo akasarudzika zvemukati zvavanotarisira.
Tags: aiteknolojia yekugadziraDatamazano e dataFacebookPersonalizationmutsikisikutsikisatech zanoTechnologytekinoroji zano